Ireo mpamatsy sy orinasa any Earplusg Bandana - Mpanamboatra China Earplusg Bandana
Azo nosasana sy azo ampiasaina indray, saron-tava vita amin'ny tanana na fantsom-boaloboka ity izay fantatra ihany koa amin'ny saron-tava gaiter / banda. Ireo rehetra ireo dia vita any Sina ary azo hanaovana amin'ny fomba maro samihafa. Ataovy toy ny saron-tava ski, gaiter amin'ny vozona, balaclava, saron-tarehy, fehiloha, fiarovana masoandro, ambanin'ny fiarovan-doha / satroka sy maro hafa! Ny lamba dia vita amin'ny polyester 95% miaraka amin'ny spandex 5%. Mandoko-tanana izahay ary manamboatra ny fehiloha ao amin'ny Golden, CO ary ny Greater Denver Area. Ny entana rehetra dia nojerena intelo mba hitazomana ny ...
Polygiter amin'ny vozona polyester sofina
Bandana mpamolavola miaraka amina tadivavarana tadivavarana tadiavina
Bandana misy tadin'ny tadin'ny tadin'ny sofina balaclava ho an'ny lehilahy
Bandana misy tadin'ny tadin'ny tadin'ny sofina
saron-tava fehiloha bandana durag hatoka
fanao Bandana miaraka amina tadivavatra amin'ny tadin'ny tadiny
Polyester sofina tadivavarana vozona gaiter famolavolana vaovao
landihazo sofina tadiny vozona gaiter famolavolana vaovao
Bandana misy tadivavarana tadin'ny sofina manarona loko